Yini okufanele uyenze ngemuva kokudalulwa Kwentela Yentela eNew Jersey? - I-NJ & NY Real Estate, i-Probate, i-Foreclosure Defense kanye ne-Bankruptcy Lawyers
Ikhaya / Blog / Ukuvikelwa Kwemboni YeNew York / Yini okufanele uyenze ngemuva kokudalulwa Kwentela Yentela eNew Jersey?
Noma ngabe isahlulelo sokugcina sehlele phansi kuwe ekubonakalweni kwaseNew Jersey tax Lien, kungahle kungabi sekephuze kakhulu ukulwela ubulungiswa. Kungenzeka ukuthi ulwele ukubuyisa ikhaya lakho noma inani elimelewe yiNew New Home Home. Noma kungakapheli isikhathi esingaphezu konyaka kudalulwe ukubonwa kwemali yentela, kusengakwazi ukulwa nokuqinisa amalungelo akho mayelana nempahla yakho. Akukhathalekile ukuthi ngabe ukweleta malini ngentela yakho, usenamalungelo.
Uma njengamanje ubhekene nesitifiketi esivelayo sokuthengiswa kwentela eNew Jersey, unezinketho eziningi kunalokho uma ngabe wawusubonakalisile ikhaya lakho. Siyakuhlonipha ukuthi kungenzeka ukuthi ubhekene nesikhathi esinzima. Siyaqonda ukuthi ungahle ufune ubumfihlo, futhi ukhathele ngabantu abangqongqoza emnyango wakho. Abantu abangqongqoza emnyango wakho kungenzeka basebenzise isimo sakho. Ngokushesha lapho kufakwa ama-pendens e-lis ukuqala inqubo yokuboniswa, ubumfihlo bakho buqala ukungenelwa ngabantu abafuna ukwenza inzuzo ngesimo sakho. Izinkampani ezifana NJ Lispendens.com uzoqala ukuthengisa imininingwane yenkantolo yakho kubantu abafuna ukwenza inzuzo ezinkingeni zakho.
UNGAYIQHAWULA EKHAYA LAKHO. Khuluma nommeli ukuze wenze konke ongakukhetha. Sisebenzisana nabantu ukuthuthukisa uhlelo oluya phambili ngaphambi nangemva kokubikezelwa Kwentela. Asinqunyelwe ekunikezeni isixazululo esisodwa sabantu. Sinikezela ngezinsizakalo eziningi ezisukela ekukhokheni isikweletu sentela, ukubuyisa impahla ngemuva kokudalulwa kwentela, ukuqothuka, ukuthengiswa kwasekhaya, izindawo okuxoxiswane ngazo. Sinabameli abasebenza ku-Selectate Matters ukuze kuthi uma ifa libhekene nokuvezwa kungasiza ukonga impahla ngenkathi sisebenza kwezinye izindaba.
Ukudalulwa kwesitifiketi sokukhishwa kwentela ye-NJ yentengo ehlukile kunokubikezelwa kwemali engaziwa nge-NJ yasebhange.
Ukuvezwa kwesitifiketi sokuthengisa ngentela kwehlukile kune- a Ukwembulwa kwemali mboleko yasebhange. Ngokujwayelekile ngeke kube nendali yesherifu yaseNew Jersey ngemuva kokudalulwa ngaphandle kokuthi uhulumeni weFederal naye ephethe umqambimanga kule ndawo. Esikhundleni salokho, umahluleli Ekuvezweni Kwempahla Yentela uzosayina indlu yakho kumnikazi athenge isitifiketi Sokuthengiswa Kwempahla Yentela. Bangu incwadi yokubhala yabamelis ukuthi abantu bangatshala kanjani imali kumaTela Ama-tax Liens. Abanye abameli bakhipha izethulo kubatshalizimali ukuthi ungasizakala kanjani ngokubikezelwa Kwesitifiketi Sentengiso Yentela. Abanye abameli banikeza izeluleko zendlela yokwambulelwa futhi amathiphu wokuzijwayeza ukubikezelwa kweNtela yeNtsha yaseNew Jersey.
Silwela abanini bemizi ukuthi bangasindisa kanjani amakhaya abo ekubikezelweni kwezimangalo zentela eseNew Jersey, nokuthi bangayikhipha kanjani imigwebo yeTaxi Lien. Kunezizathu eziningi zokuphelisa ukuthengiswa kwezimpahla ezingekho emthethweni eNew York insiza enenkinga. Sijabule kakhulu ukwedlula zonke izindlela zokuvikela onazo, kodwa-ke asitsheli wonke umuntu ukuthi angazivezi ukuthi yiziphi izivikelo zakho.
E-2019, eNew Jersey namanje ihola i-United States ku-Foreclosures. Ngokushesha nje lapho ukhuluma nommeli weNew York Foreclosure Defense, ngokushesha ungaphuma kulolu hlu.
Lazaro Cardenas, Esq. uzakwethu ePatel, Soltis naseCardenas enamahhovisi eJersey City, eFrance, naseHackensack. Ugxila emthethweni weTrust and Estate ngokuqonda ukuthi kuhlobana kanjani neZembuliso Zentela kanye Nokubikezelwa Kwezintela Zentela. Ngeminye imininingwane noma ukusetha ukubonisana sicela uvakashele www.Focuselaw.com, usithumelele i-imeyili [Email protected] noma ushayele ucingo 844-533-3367. Njenganoma yiluphi udaba lwezomthetho, isethi yomuntu ngamunye yezimo ziyehluka futhi le ndatshana ayihloselwe ukunikeza izeluleko ezingokomthetho zesimo sakho esithile, kodwa ukuhlinzeka ngesibukezo sokwethenjwa.
NJSA 17: 30D-11. Isikhwama Sokubuyisa; umgcini; ukukhishwa kwemali; utshalomali